Çiğli Belediyesi Soğuk Havalarda Öğrencileri Unutmadı – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirDawlada Hoose ee Çiğli ma illoobin Ardayda Cimilada qabow
09 / 01 / 2020 35 Izmir, Turkish Aegean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
degmada cigli ma iloobin ardayda jaamacadaha cimilada qabow
Duqa magaalada Cigli Utku Gumrukcu, Jaamacadda Izmir Katip Celebi intii lagu gudajiray imtixaannadii ugu dambeeyay si ardayda looga taageero inay la kulmaan baahida loo qabo gaadiid iyo qaybinta maraqa kulul ee la faray.
Duqa Magaalada Çiğli Utku Gumrukcu wuxuu bilaabay daraasad si loo hubiyo in ardayda Izmir Katip Celebi University aysan ku soconin hal kiilomitir oo ka baxa bixitaanka Izkent Egekent xerada inta lagu gudajiro imtixaanada ugu dambeeya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale bixiyay qeybinta maraqa kulul ee jaamacadda inta lagu gudajiro finalka si loogu kululeeyo ardayda gudaha cimilada qabow. Xusuusinta inay lashaqeeyaan İzmir Katip Çelebi University, oo ah mid kamid ah jaamacadaha muhiimka ah ee İzmir, maadooyin badan isla markaana ay wada saxiixdeen borotokool badan. Dr. Waxaan xiriir aad u wanaagsan la leenahay Saffet Köse, maamulka jaamacadda iyo ardayda. Waxaan had iyo jeer tixraacnaa talooyinka tacliinta ee jaamacadeena shaqooyinka aan qabanno iyo waxaan rabno inaan qabno. Intaa waxaa sii dheer, degmo ahaan, waxaan isku dayeynaa inaanu la kulano baahiyaha jaamacadda iyo ardayda awoodayada iyo dariiqeenaba. Waqtigan xaadirka ah, dhibaatada ugu weyni waa masaafada udhaxeysa Izban Egekent Station iyo xerada kambaska. Waxaan si dhaw ula shaqeynaa Dowlada hoose ee Magaalada Izmir si loo xaliyo dhibaatada xarunta. Laakiin waqtigaas, inta lagu gudajiray imtixaannadii ugu dambeeyay, waxaan gelinay duulimaadyo giraan ah inta udhaxeysa bixitaanka Izat Egekent Duragi Balatcik Neighborhood iyo kambuulka si aan qabowga qabow ugu dhicin. Waxaan ardaydeena u wadanaa labo saacadood aroortii iyo laba saacadood galabtii ”.
Madaxweyne Gümrükçü: "Maraq kulul oo soo jiidasho leh"
Xusuusinta inay bilaabeen u adeegida maraq kulul si ay ardayda ugu qaboojiyaan qaboojinta jawiga, Duqa Kastamka ayaa sii watay hadalkiisa sida soo socota: - Waxaan nidhi, "Aynu samaynaa maraq kulul aroortii inta lagu jiro ciyaaraha kama dambaysta ah si ay ardaydeenu u kululaan karaan cimilada qabow oo ha iloobinina inay quraac sameeyaan inta lagu jiro imtixaanka. Qalabkayaga ayaa noo oggolaaday inaan ku baahinno kambuyuutarrada. Wuxuu leeyahay qaab dhab ah oo xasaasi ah oo daryeel leh waanan uga mahadcelinayaa. Maanta, aroortii, waxaan ka degay Egekent Stop with İzban waxaanan raacay ardayda. Waxaan ka wada hadalnay baahiyahaaga. Waxaan doonayay inaan siiyo maraq. Xoghayaha Guud ee Jaamacadda Mr. Nurettin Memur iyo Assoc. Yaasiin Bulduklu ayaa na soo dhoweeyay. Waxaan siineynay ardaydeenna wadarta maraq. ”
Ardayda ayaa mahad leh
Ardayda jaamacadda İzmir Katip Çelebi waxay muujiyeen sida ay ugu qanacsan yihiin adeegga heeganka iyo maraqa diiran. Ardaydu waxay yiraahdeen, nedeniyle Sababtoo ah dhamaadka ciyaaraha, waxaan wax baranaa ilaa subaxdii. Intii lagu gudajiray maalmahan markay hawadu aad u qabowday, waxaan soconnay hal kiiloomitir kadib joogsiga Izban. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ogaanno in adeegga la adeegay usbuucii la soo dhaafay. Dusha sarena, maraq diiran ayaa diiran. Runtii waan u mahadcelineynaa Duqa Magaalada Utku ”.
TÜVASAŞ 19 ma iloobin Maalinta Hawlgabka ee Sebtember 2012
Olympos Teleferik ma iloobin carruurta inta lagu jiro fasaxa simistarka
Demirspor ma iloobin ciyaaryahankii hore
18 Mart Ma iloobi doonin guushii reer galbeedka
Qaboojiyaha qabow qabow
Nolosha Rugaha Qabow
Shaqooyinka Estram waxay sii socdaan inkastoo Cold Weather
Cimilada qabowga waxa ay keentaa Jajabka Ray ee IZBAN Line
YHT waxay jabisaa rikoodhada rakaabka sababtoo ah qabow iyo roobab
Shaqooyinka BTK Rail Line, Dhageysiga Barafka iyo Qabow
Adeegga basaska ee kulaylka iyo kuleylka kulul ayaa bilaabmay
Safkar Ege Qaboojiyaha Cabbitaanka Qaboojiyaha Air Air.Ltd.İth.A.Ş
Bixitaanka Izban Egekent
Stationzban Egekent Station
Joogsiga Izban Egekent Bus Stop
Adeegga telifoonka ee ka socda Xarunta Ibsiga Dhexe ee Isbaanishka
Fiiri Qeybta Aqoonsiga Koorarka
Imtixaannada ugu dambeeya ee jaamacadda Katip Çelebi